Dowladda Mbagathi: Soortaan ka dhargi doono saan saanteedaan ka gartaa
Dowladda Mbagathi: Soortaan ka dhargi doono saan saanteedaan ka gartaa!
W/D Suldaan Nayruus Haji Adan
Good ahaan marka la indha indheeyo xaaladda Soomaaliya ee maanta qofkii aan horey oola socon amaba ay kucusub tahay ma saadaalin karo dadka urugada latiictiicya sida ay u tiiraayeysanyihiin. Hase ahaatee dhibaatadu waa mid soo socotay muddo dheer oo aan qofna isku dayin in uu u helo xal waara.
Albaabka nabadda Soomaalya waxaad moodaa mid qufulan, laakiin waxaa yar dadka isku dayaaya in ay raadiyaan furaha qufulkaas.
Waxaa yaraatay in la arko dad u taagan danta guud, umaddana waxay kadaaleen shirarka dib u heshiisinta ee loo qabanayo soomaaliya, maxaa yeelay waxay horey u soo arkeen shirar farbadan oo dib u heshiisiin ah, oo in ay wax kasoo naasa caddaan iska daaye dabka gaas ku sii huriya.
Haatan su’aashu waxay tahay dadku rajo intee la eg ayey kaqabaan doladda Mbagathi lagu soo yagleelay?
Good ahaan mara la eego rajada ay umaddu kaqabeen shirkaasi waxay ahayd mid iska liidatey. Waa marka horee shirka waxaa ka qayb galay dad ku nool dhiiga maatida, dad aan muwaadiniin ahayn oo u shaqeeya dalal shisheeye iyo kuwo ayagu danahooda gaarkaa eegta, oo aan laguba soo qaadi karin midda guud.
Waxayse rajadu buur qarkeed fuushay shirka oo gabagabo ku dhow markii ay ku dhiiradeen qaar kamid ah hogaamiyaasha kooxaha in ay katagaan shirka, dagaalana dib ooga abaabulaan meelo kamid ah gobolada koofureed ee soomaaliya, markii ay ka farxasheen dagaalkiina ay dib oogu laabteen madashii, halkaasna dib u heshiisiinta gees ay kagaleen, taasoo ay in badan dadku is waydiiyeen shirku ma mid dib u heshiisiin ah baa? mise waa mid dib u abaabul dagaal?
Sikastaba ha ahaatee daruufaha lagu jiro, dagaaladda sokeeye ee dubtay umadda iyo waliba siyasaha jahwareersan ayaa dadka ka dhigay kuwo aan marnaba ku kalsoonaan shirkasta oo laqabto.
Dowladda lagu soo dhisay shirka dib u heshiisiinta ee Mbagathi ayaa u muuqata midaan waxba dhaami doonin kuwii horay loogusoo fara murxay, maxaa yeelay ayadoon wali ladhamaystirin xubnaha dowladdaas, ayaa madaxda oogu saraysa dowladdaas waxay bilaabeen is qabqabsi, iyo waliba aflagaadooyin gacan kahal gaaray, iyadoo dad goob joog ka ahaa halka lagu casilayey xukuumaddii Prof Geedi ay sheegeen in xildhibaanada baarlamanka aysan biyo u kabedeen in ay hub isku adeegsadaan haddii uu fadhigaani kadhici lahaa meel ka mid ah waddan soomlaiya.
Isku soo wada duuboo doladda ku bilaabatay caddalad darro iyo is ixtiraam la’aan, ayaa ah mid wax muuqta aan u keeni doonin dadka Soomaaliyeed, waxayna ku xasuusinaysaa araahda soomaaliyee ee dhahaysa SOORTAAN KADHARGI DOONO SAANSAANTEEDAAN KAGARTAA.
iyo wararka kale ee Boosaaso... Guji...